Jeedinta khudbadaha musharixiinta oo ka socota xarunta golaha shacabka. – Radio Daljir
Jeedinta khudbadaha musharixiinta oo ka socota xarunta golaha shacabka.
Febraayo 2, 2017 2:57 b 0
Muqdisho, Feb 02 2017-Khudbad Jeedinta Musharaxiinta u taagan xilka Madaxtinimada Soomaaliya ayaa bilaabatay, waxaana Musharaxiinta ay Soo bandhigayaan Waxqabadkooda Hadii ay noqdaan Madaxweynaha Soomaaliya.
Hadaljeedinta Ama Khudbadjeedinta ayaa waxaa dhageysanaya Xildhibaanada labada gole ee dowladda Soomaaliya.
Maanta oo Khamiis ah ilaa iyo Sideed Musharax ayaa khudbado jeedin doona.
Axmed Maxamed Cabdi
Shariif Sheekh Axmed.
Barnaamijyada 94 Uncategorized 9751
DHEGEYSO-Qaadista canshuuraha gaadiidka oo ka socda magaalada Qardho.